Ny harato ACE Family mendrika nojerena rehefa nandanjalanja ny vola mitentina 9 tapitrisa dolara nataon'i Austin McBroom - Pop-Kolontsaina
Ny harato ACE Family mendrika nojerena rehefa nandanjalanja ny vola mitentina 9 tapitrisa dolara amerikanina nataon'i Austin McBroom
ny Fianakaviana ACE fanjakana toa rava. Ny antontan-taratasy dia mampiseho fa ny tranon'ny fianakaviana dia voalaza fa hamidy amin'ny 22 septambra. Nahazo fampandrenesana ny fianakaviana tamin'ny 25 mey momba ny indram-bola naloany, izay nahatratra 9 tapitrisa dolara.
Na dia mivarotra ny tranony aza ny fianakaviana dia mbola ho 5 $ + fohy ny azy ireo.
- OnePieceofJaz (@sailorsunmoonn) 8 Jolay 2021
Tsy taitra ireo mpankafy noroahin'ilay fianakaviana noho izy ireo nanambatra trano roa hananganana ny trano nofinofy 7,5 tapitrisa $.
Ny ACE Family dia fantatra amin'ny vlogs ao amin'ny fianakaviany ao amin'ny YouTube. Nanangona mpanjifa maherin'ny 19 tapitrisa ao amin'ny fantsona izy ireo.
Inona ny sandan'ny fianakaviana ACE?
Ny fianakaviana ACE dia misy patriarika Austin McBroom sy ny vadiny, Catherine Paiz McBroom. Ilay voalohany dia nanomboka tamin'ny naha-kintana basikety amerikana azy ary i Catherine kosa dia maodely, mpilalao sarimihetsika ary kintan'ny internet any Canada.
Lahatsoratra zarain'i Austin McBroom (@austinmcbroom)
Nifampiresaka tamin'ny fiaraha-misakafo izy roa ary nanomboka nanohy fantsona YouTube. ACE dia fanafohezana misy ny inisialy avy amin'ny anarany voalohany sy ny voalohan'ilay lahimatoa, Elle. Ny fianakaviana ACE dia lasa fianakaviana dimy miaraka amin'ny fahaterahan'i Alaia Marie sy Steel McBroom.
Ny fianakaviana miteraka resabe dia mitentina 22 tapitrisa dolara hatramin'ny taona 2020, nahazo vola tsy tamin'ny sehatra media sosialy natokana ihany fa tamin'ny fivarotana ny entam-barotra manokana, ny tohana ary ny vola miditra amin'ny doka.
Lahatsoratra zarain'ny Social Gloves Entertainment (@socialgloves)
Austin McBroom ihany koa no voalaza fa tompon'ny Social Gloves Entertainment. Nanjary nalaza ilay orinasa vao tsy ela akory izay taorian'ny fampiantranoana ny Social Gloves: Battle of the Platforms: YouTubers vs TikTokers.
Ny McBroom 29 taona koa dia nandray anjara tamin'ny lalao ady totohondry ary niady tamin'ny TikToker Bryce Hall.
Nanomboka tondra-drano ny internet ny tsaho taorian'ny niresahan'ny podcast an'ny BFF, Dave Portnoy sy Josh Richards, momba ny patriarka ao amin'ny fianakaviana ho tompon'andraikitra amin'ny tsy fandoavana ireo mpanao ady totohondry sy mpanakanto avy amin'ilay orinasa.
YouTuber Tana Mongeau, malaza amin'ny horonantsary momba ny tantarany dia nitifitra an'i Austin McBroom ihany koa noho ny tsy fandoavany ny karaman'ny mpiasany. Jake Paul taloha koa dia nibitsika an'i McBroom ho an'io.
tsy austin mcbroom manana ny ankamaroan'ny fonon-tànana ara-tsosialy ary avy eo ny olona rehetra gaga dia tsy mahazo karama
- CANCELED (@tanamongeau) 26 Jona 2021
Androany any amin'ny aloka: Jake Paul dia mampitaha an'i Austin McBroom amin'ny mpamorona ny Fyre Fest - ny festival mozika izay malaza noho ny tsy fahombiazany fotsiny. Izany dia taorian'ny nanombohan'ny olona marobe niaraka tamin'ny ‘YouTube vs TikTok’ nanambara fa tsy voaloa ny karamany. pic.twitter.com/8en6oeAKi1
- Def Noodles (@defnoodles) 26 Jona 2021
Ny fianakavian'i ACE dia tsy tafiditra fotsiny ao fitoriana maromaro fa tompon'andraikitra amin'ny fanodikodinana ireo mpankafy ihany koa amin'ny fangatahana azy ireo handoa vidiny premium ho an'ny atiny manokana ao amin'ny sehatra ACE Club, izay noforonin'i Austin McBroom.
Ny fianakavian'i CCE McBroom an'ny ACE Family dia voalaza ihany koa fa namitaka ny mpankafy tamin'ny marika 1212 Gateway ho an'ny hoditra. Mpankafy maro no voalaza fa tsy nahazo ny fonosany taorian'ny fandoavam-bola, ary tsy namaly ny antso nataon'ny mpanjifa koa ny orinasa.
Ny mpanjifa Ace Family koa dia nanana olana tamin'ny marika momba ny hoditra 1212 Gateway an'ny fianakaviana, zavatra izay mbola tsy notenenin'ny olona ampahibemaso. https://t.co/5P5i2YHM9i
Ny fianakaviana ACE dia namaly ny fanambarana fandroahana tamin'ny filazàna fa tsy nivoaka ny tranony izy ireo fa tsy nahavita namaly ireo mpankafy momba ny filazan'ny hatsaran-tarehy.
ahoana no ataoko mba hahalavorary ny fiainako
inona no tanjona hapetrakao ho anao
ahoana no hanazavana ny antony itiavanao olona
raha sipa manoroka anao dia tiany ianao